May 3, 2021 N88LeaveaComment on काेराेनाकाे भयावह : पशुपतिमा ‘लास’काे लाइन, जलाउने पालाे पाउनै मुस्किल (फाेटाे फिचर)
काठमाडाैं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को दोस्रो लहर तीव्र भएसँगै पशुपति क्षेत्रस्थित विद्युतीय शवदाह गृहमा सङ्क्रमण भई निधन भएकाको शव आउने क्रम बढ्न थालेको छ । कोरोना सङ्क्रमण भई निधन भएका दैनिक सरदर ३० को हाराहारीमा शव आउन थालेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा प्रदीप ढकालले जानकारी दिनुभयो । विद्युतीय शवदाह गृहमा […]
May 3, 2021 N88LeaveaComment on कर्णालीमा थप सात दिन सार्वजनिक बिदा
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले विसं २०७८ मा सात दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रस्तावमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस वर्षका सार्वजनिक बिदा स्वीकृत गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता विमला केसीद्वारा सार्वजनिक गरिएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयानुसार असार १५ गते जुम्लाबाहेक नौ जिल्लामा धान दिवस, साउन १ गते साउने […]
May 3, 2021 N88LeaveaComment on नेपालमा काेराेनाबाट अहिलेसम्मकै धेरै जनाकाे मृत्यु
काठमाडाैं । कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट ३७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सात हजार ४४८ जनामा संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ३७ जनाले ज्यान गुमाएका हुन्। योसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या तीन हजार ३६२ पुगेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर चलेयता मृत्यु हुनेको संख्या सबैभन्दा बढी हो। यसअघि १६ वैशाखमा ३५ […]
May 3, 2021 N88LeaveaComment on कोरोनाबाट संक्रमित इन्जिनियर पन्तको २८ बर्षको अल्पआयुमै निधन
भरतपुर । कोभिड- १९ को संक्रमणबाट इलेक्ट्रीकल इन्जिनियर सन्जिब पन्तको निधन भएको छ । २८ वर्षिय पन्तको शनिवार चितवनमा अल्पायुमै निधन भएको हो। कोभिड-१९ संक्रमित पन्त अस्पताल भर्ना भएको तीन दिन भएको थियो । अध्यापन पेशामा कार्यरत पन्तले पश्चिमाञ्चाल क्याम्पस पोखराबाट डिप्लोमा र नेश्नल कलेज अफ इन्जिनियरिङबाट इलेक्ट्रीकल विषयमा बीई अध्ययन गरेका थिए । बाग्लुङ्ग […]
क्यान्सर सङ्ग ल’डि’रहेकी आदिती अन्तत सधैंका लागी बिदा भईन यो दुनियाँ बाट !
May 3, 2021 N88LeaveaComment on क्यान्सर सङ्ग ल’डि’रहेकी आदिती अन्तत सधैंका लागी बिदा भईन यो दुनियाँ बाट !
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा ब्लड क्यान्सरबाट पीडित युवतीको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका शिवनगरकी २३ वर्षिय अदिति जोशीको शनिवार उपचारका क्रममा धनगढीमा निधन भएको हो। सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत ती युवती गत माघ देखी भारतको दिल्ली स्थित हस्पिटलमा उपचाररत थिइन्। ब्लड क्यान्सर बाट पीडित ती युवतीको स्वास्थ्यमा केही सुधार आएको बताइएपछि गत साता मात्रै कञ्चनपुर […]
May 3, 2021 N88LeaveaComment on एमालेले फेसबुक च्याटमा सोध्यो माधव नेपाल समूहका थप तीन जना सांसदलाई स्पष्टीकरण
काठमाडौं । नेकपा एमालेले माधव कुमार नेपाल समूहका थप तीन जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले गंगा चौधरी, कलिला खातुन र समीना हुसेनलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । तीनै जनालाई सामाजिक सञ्जाल म्यासेञ्जरबाट स्पष्टीकरण सोधिएको छ । यसअघि नेता नेपालसहित २७ जनालाई इमेलमार्फत स्पष्टीकरण सोधिएको थियो […]
May 3, 2021 N88LeaveaComment on चुनाव जितेको खबर पाएपछि विवाह बीचैमा रोकेर बेहुली जब मतगणनास्थल पुगिन्
एजेन्सी । मण्डपमा बेहुला बेहुली बसिरहेका थिए । विवाहको कर्म भइरहेको थियो । त्यसैमा वेहुलीले चुनाव जितेको समाचार मण्डपमा आइपुग्यो । उनले (बीडीसी) गाउँ विकास समिति सदस्यको रूपमा पञ्चायत चुनाव जितेको खबर पाइन् उनले त्यो खुसी सम्हाल्न सकिनन् ।उनले विवाह छोडेर हिडिन् । दुलहीले बिहेको समारोह बीचमा रोकेर सिधै मतगणना स्थल पुगीन् ।यो घटना रामपुरको […]
May 3, 2021 N88LeaveaComment on चर्चामा प्रियंकाको बेबी बम्प, फ्यानले गरे गाली !
काठमाडाैं । प्रियंका कार्की यतिबेला आफ्नो गर्भावस्थाको मज्जा लिइरहेको छिन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफुहरु अभिभावक बनेको खबर दिएदेखि नै प्रियंकाको चर्चा चुलिएको हो । केही समय अघिदेखि सामाजिक सञ्जालमा उनी गर्भवती छन् कि भन्ने विषयमा चर्चा चलेको थियो। उनका शुभचिन्तक तथा फ्यानहरूले उनी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नदेखिएको र पोस्ट गरिएका फोटोमा मोटाएको देखिएको जस्ता कुरालाई […]
दु:खद् खबर : सबैलाई सुरक्षित रहन भन्दै डाक्टरले गरे देहत्याग …
May 3, 2021 N88LeaveaComment on दु:खद् खबर : सबैलाई सुरक्षित रहन भन्दै डाक्टरले गरे देहत्याग …
एजेन्सी । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा एक जना डाक्टरले आत्म” ह, त्या गरेका छन्। दिल्लीको साकेतस्थित म्याक्स अस्पतालको कोरोना वार्डमा खटिएका ३५ वर्षीय डाक्टर विवेक रायले आत्म…. गरेका हुन्। कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि विवेक निकै त, ना, वमा रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। दिल्ली प्रहरीले विवेकलाई साडीको सहायताले पंखामा झु, न्डि, […]
May 3, 2021 N88LeaveaComment on सुपरस्टार अल्लु अर्जुनलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि
काठमाडौं । साउथका सुपरस्टार अल्लु अर्जुनलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । सुपरस्टार अल्लु अर्जुन आफैले सोसल मिडिया ट्वीटरमार्फत् आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको जानकारी दिएका हुन् ।अहिले उनी होम आइसोलेसनमा रहेका छन् । उनलाई केही दिन अगाडिसम्म आफ्नो सम्पर्कमा रहेका सम्पूर्णलाई कोरोना टेष्ट गराउनका लागि आग्रह पनि गरेका छन् ।उनले लेखेका छन्, ‘मलाई कोरोना […]